Indlu yaseLwandle kuMbindi weNdalo-Cond São Pedro - I-Airbnb
Indlu yaseLwandle kuMbindi weNdalo-Cond São Pedro
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCamilla
Indlu yaselwandle izisa umoya okhethekileyo kunye nobucala. Ifumaneka eGuarujá, kwindawo yogcino yendalo esingqongileyo yaseSão Pedro, apho i-70% yommandla wayo igcinwe kumahlathi eAtlantiki. Ulwandle luhamba ngemizuzu eyi-10 ukusuka kwindlu, inesanti emhlophe kunye nolwandle olucacileyo. I-condominium ine-pool yamanzi endalo / i-waterfall, iinkundla zentenetya, i-skating rink, ibha ejongene nolwandle, nebala lokudlala, indawo yokutyela, igumbi lokutshintsha, iishawa kunye nezitulo zaselwandle. Ikwanayo ne-concierge yeeyure ezingama-24 kunye nenkonzo yokhuseleko enemoto.
Indlu ekhululekileyo kunye neyabucala, ejonge kwiHlathi leAtlantiki. Kuye imigangatho-3, le mntanam-1 Suite kunye umandlalo kabini kunye igumbi TV labucala, kumgangatho ophakathi abandwendweli ababini, omnye kunye neebhedi 2 abangatshatanga kwebhedi kwibhanka kunye nezinye ne-2 iibhedi, kwebhedi kwibhanka kunye umgangatho ojonge ihlathi. Ezantsi kukho igumbi leTV kunye negumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokutyela, iphuli yokuqubha, indawo yokuphumla yangaphandle kunye nebarbecue.
Indlu ayinabo abamelwane abasondeleyo, nto leyo ikunika imfihlo. Ngaphambi kwendlu kunokwenzeka ukupaka iimoto ezi-4. Indlu yimizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka elunxwemeni, kwaye ikhondom ineveni rhoqo ngemizuzu engama-20 ukukusa elunxwemeni, iingxangxasi, iinkundla zentenetya, irenki yokutyibiliza okanye naphi na apho kufuneka khona.
I-Sitio São Pedro condominium ibekwe kwindawo yolondolozo lwendalo. Ngokufikelela kuphela kwiindwendwe, ngoko ulwandle luhlala lucocekile kwaye lungenanto. Icondominium ixhotyiswe ngeekhamera zokhuseleko kunye noonogada abasebenza imini nobusuku. Indawo yaseSão Pedro ikubonelela ngonxibelelwano nendalo, uxolo kunye noxolo ngexesha lokuhlala kwakho.
Ukufikelela eSão Pedro kuhamba nge-km 16.8 ye-Ariovaldo de Almeida Viana Highway, eyayifudula iyiNdlela yaseGuarujá-Bertioga. Indawo yokuhlala yiLot 4314 kwaye ibekwe eRua 10 ngaphakathi kwekhondom.
Ngaphakathi kweCondominium yaseSão Pedro uya kufumana iilwandle ezi-4 ezibalaseleyo eGuarujá ezikude kumbindi wesixeko kwaye zaziwa kuphela kubathandi bendalo. Praia de São Pedro, Praia das Conchas, Praia de Iporanga kunye ne Praia de Taguaiba.
Kuyenzeka ukuba uhambe ukusuka eSão Pedro ukuya ePraia das Conchas, kwaye uqhubeke kude kube sekupheleni, udlula kwikhondomu yaseIporanga kwaye ufike ePraia de Iporanga. Ukufikelela elunxwemeni lwaseTaguaiba, kuyafuneka ukuba ungene kwikhondom yabo kwaye ume kwindawo yokupaka njengondwendwe.
Ndiya kuba kwindawo yokuhlala ukuze ndinikeze izitshixo, ndibonise indlu, ndichaze indlela i-condominium esebenza ngayo, iindawo zokuzonwabisa ezikhoyo kunye nendlela yokufikelela kuzo, iilwandle ezikufutshane kunye nendlela yokufika kuzo kwaye uhlambulule nawaphi na amathandabuzo.
Ndiya kuba kwindawo yokuhlala ukuze ndinikeze izitshixo, ndibonise indlu, ndichaze indlela i-condominium esebenza ngayo, iindawo zokuzonwabisa ezikhoyo kunye nendlela yokufikelela…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Balneario Praia do Pernambuco